လင်းပိုင်ကိုလေ့လာတဲ့သူသုတေသီများသူတို့ကိုမေးခွန်းများကိုမမေးနိုင်ပြီးထို့ကြောင့်မိမိတို့၏အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လင်းပိုင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကြိုးစားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ လူသားမြားသညျကိုလေ့လာတဲ့သူသုတေသီများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုမိုလွယ်ကူကရှိသည်: မိမိတို့၏ဖြေဆိုသူစကားပြောရန်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေကိုပြောနေတာအတိတ်တွင်လူမှုရေးသုတေသန၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ငါကလည်းအနာဂတ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်။
စစ်တမ်းများနှင့် In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း: လူမှုရေးသုတေသနများတွင်လူတွေကိုပြောနေတာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုပုံစံများကြာပါသည်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောစစ်တမ်းများသုံးပြီးသုတေသနပြုသင်တန်းသားများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များ, အလွန်အမင်းစနစ်တကျစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများနှင့်အပိုကြီးတဲ့လူဦးရေမှသင်တန်းသားများကိုယဘေုယမှစာရင်းအင်းနည်းလမ်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုစနစ်တကျစုဆောင်းပါဝငျသညျ။ In-depth အင်တာဗျူးများကို အသုံးပြု. သုတေသနအခြားတစ်ဖက်တွင်, ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တန်းသားများ, Semi-စနစ်တကျပြောဆိုမှုများနှင့်ပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးကြွယ်ဝသော, အရည်အသွေးဖော်ပြချက်များတွင်ရလဒ်များသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကပါဝငျသညျ။ စစ်တမ်းများနှင့် In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းနှစ်ဦးစလုံးအစွမ်းထက်ချဉ်းကပ်သော်လည်း, စစ်တမ်းများပိုပြီးဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ဖို့ Analog စကနေအကူးအပြောင်းများကထိခိုက်နေကြသည်။ ထိုကွောငျ့, ဤအခနျးတှငျ, ငါသည်စစ်တမ်းသုတေသနအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ငါသညျဤအခနျးမှာပြသပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မေးခွန်းတွေအမျိုးမျိုးမေးရန်နှင့်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူစစ်တမ်းအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးကိုချီးမြှင့်, ပိုမိုလျင်မြန်စွာနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာစွာဒေတာစုဆောင်းရန်စစ်တမ်းသုတေသီများအဘို့များစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ စစ်တမ်းသုတေသနတစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုခြင်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်သောစိတ်ကူးသို့သော်အသစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တယ်လီဖုန်း: 1970 ဝန်းကျင်, အလားတူပြောင်းလဲမှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖြင့်မောင်းနှင်ရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းသုတေသနပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စစ်တမ်းသုတေသနကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကအသိအမှတ်ပြုရန်အဖြစ်စစ်တမ်းသုတေသန, 1930 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းသုတေသန၏ပထမခေတ်ကာလအတွင်းသုတေသီများကျပန်း (ထိုကဲ့သို့သောမြို့လုပ်ကွက်ကဲ့သို့) ပထဝီဒေသများအမြည်းမယ်လို့ပြီးတော့ကျပန်းနမူနာအိမ်ထောင်စုများတွင်လူတို့နှင့်အတူမျက်နှာ-to-မျက်နှာပြောဆိုမှုများရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အဲဒီဒေသတွေမှာသွားရောက်။ ထို့နောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝအတွက်ကြိုးဖုန်းဖုန်းများတစ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ-The ကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့နိုင်ငံများတွင်-နောက်ဆုံးမှာစစ်တမ်းသုတေသန၏ဒုတိယခေတ်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤဒုတိယခေတ်ကလူနမူနာခဲ့ကြသည်ဘယ်လောက်နှင့်စကားစမြည်ရာအရပျကိုယူပုံနှစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားပါတယ်။ ဒုတိယခေတ်မှာတော့မဟုတ်ဘဲပထဝီဒေသများရှိအိမ်ထောင်စုနမူနာကောကျထကျ, သုတေသီများကျပန်းကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုကိုခေါ်နေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကိုနမူနာ။ ထိုအမဟုတ်ဘဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလူစကားပြောခရီးသွားလာခြင်းထက်, သုတေသီများအစားတယ်လီဖုန်းပေါ်ကသူတို့ကိုခေါ်။ , ဤရွေ့ကားသေးငယ်တဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစသောအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ထင်သော်လည်း, သူတို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စစ်တမ်းသုတေသနလုပ်, စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ထို့ထက် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ များစွာသောသုတေသီများသည်ဤသစ်ကိုနမူနာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဘက်လိုက်မှုအမျိုးမျိုးမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်သောကြောင့်အားပေးဖြစ်ခြင်းအပြင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရှိကြ၏။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ, အလုပ်အများကြီးပြီးနောက်သုတေသီများယုံကြည်စိတ်ချရသောကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးကိုအသုံးပြုပြီးဒေတာတွေကိုစုဆောင်းဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ်။ ထို့ကြောင့်အောင်မြင်စွာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများအသုံးချဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေအသုံးပြုပုံသုတေသီများသူတို့စစ်တမ်းသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုခေတ်မီနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
အခုတော့အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ-ဒစ်ဂျစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်းအသက်အရွယ်-ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းသည်ဒုတိယခေတ်ချဉ်းကပ်၏တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုယွင်းနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်မောင်းနှင်လျက်ရှိသည် (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်, နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအဘို့, nonresponse နှုန်းထားများ-သည်, တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မနမူနာလူမျိုး၏အချိုးအစားနှစ်ပေါင်းများစွာတိုးပွားလာခဲ့စစ်တမ်းများ-ကြပါပြီ (National Research Council 2013) ။ ဤရွေ့ကားရေရှည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဆိုပါ nonresponse နှုန်းမှာယခုစံတယ်လီဖုန်းစစ်တမ်းများအတွက် 90% ထက်မကျော်လွန်နိုင်မဆိုလို (Kohut et al. 2012) ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တတိယခေတ်မှအကူးအပြောင်းလည်းငါသညျဤအခနျးတှငျအဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်အချို့သောအရာ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုအခွင့်အလမ်းများကအစိတ်အပိုင်းအတွက်မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ အမှုအရာသေးအခြေချနေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်မစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်ကို non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ, ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်အင်တာဗျူးနှင့်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ် (စားပွဲ 3.1) မှစစ်တမ်းများများ၏ချိတ်ဆက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။
စားပွဲတင် 3.1: အပေါ်အခြေခံပြီးစစ်တမ်းသုတေသနသုံး Eraser Groves (2011)
ပထမဦးစွာခေတ် ဧရိယာဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ မျက်နှာချင်းဆိုင် stand-alone စစ်တမ်းများ
ဒုတိယအခေတ် ကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှု (RDD) ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ တယ်လီဖုန်း stand-alone စစ်တမ်းများ
တတိယခေတ် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ Computer ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်ဆက်စပ်စစ်တမ်းများ
စစ်တမ်းသုတေသန၏ဒုတိယနှင့်တတိယခေတ်အကြားအဆိုပါအကူးအပြောင်းလုံးဝချောမွေ့ခဲ့မရှိသေးပေနှင့်သုတေသီများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဘယ်လိုပြင်းစွာသောအငြင်းခုံမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယခေတ်အကြားအကူးအပြောင်းအပေါ်ပြန်ကြည့်တော့ငါတို့အဘို့အဦးတည်း key ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ယခုလည်းမရှိထင်: အစအဦးအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကအစပိုင်းတွင်အများအပြားဒုတိယခေတ်တယ်လီဖုန်း-based နည်းလမ်းများ ad hoc တို့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ခက်လုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်, သုတေသီများဒီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်။ Warren Mitofsky နှင့်ယောသပ် Waksberg ကောင်းသောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်သီအိုရီဂုဏ်သတ္တိများခဲ့တဲ့ကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုနမူနာနည်းလမ်းကိုတီထွင်မတိုင်မီဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများနှစ်ပေါင်းများစွာကျပန်း-ဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်နေခဲ့ (Waksberg 1978; ??? ) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏အဆုံးစွန်ရလဒ်နှင့်အတူတတိယခေတ်ချဉ်းကပ်၏လက်ရှိပြည်နယ်မရောထွေးသင့်ပါတယ်။
စစ်တမ်းသုတေသနများ၏သမိုင်းကိုလယ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ, နည်းပညာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုအားဖြင့်မောင်းနှင်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ကြောင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအစားဆက်လက်အစောပိုင်းကခေတ်ကနေဉာဏ်ပညာကိုဆွဲနေစဉ်အတွင်းကျွန်တော်, ကလက်ခံသင့်တယ်, ထိုငါသည်ဤအခနျးတှငျအယူတျောမူမညျသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာငါကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်စစ်တမ်းများကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏များစွာသောလျော့ကျ-The သတင်းရင်းမြစ်တိုး-မဟုတ်စစ်တမ်းများ (အပိုင်း 3.2) ၏တန်ဖိုးကိုကြောင်းမည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည်။ ကြောင်းလှုံ့ဆျောမှုပေးသော, ငါသည်စစ်တမ်းသုတေသန၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုခေတ်ကာလအတွင်းတီထွင်ခဲ့စုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင် (အပိုင်း 3.3) အနှစ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမူဘောင်ကိုယ်စားပြုမှု-in ကိုအထူးသဖြင့် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ (အပိုင်း 3.4) ကိုသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွ measurement-in ကိုမှဖြေဆိုသူမှမေးခွန်းများမေး၏အထူးသဖြင့်အသစ်နည်းလမ်းများ (အပိုင်း 3.5) အသစ်သို့ချဉ်းကပ်ကတညျး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ် (အပိုင်း 3.6) မှစစ်တမ်း data တွေကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်နှစ်ဦးကိုသုတေသနတင်းပလိတ်များကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။